China Chipboard Screws fanamboarana sy orinasa | Zhanyu
Hex lohan'ny fandavahana tena
Hex socket bolt lohan'ny kapoaka
Ny lohan'ny lohan'ny truss sc ...
· Size: M3.5 / M4 / M5 / M6
· Famaranana: nopetahana phosforous / Zinc mainty
· Loko: Mainty / fotsy / mavo
· Fonosana: Kitapo / boaty 25kg misy baoritra
Ny visy chipboard dia karazana vokatra mety amin'ny fametrahana fitaovana elektrika aorian'ny fizotry ny fitsaboana hafanana. Ampiasaina indrindra hampifandraisina sy hamehezana eo anelanelan'ny takelaka hazo sy eo anelanelan'ny takelaka hazo sy ireo takelaka vy manify. Ny habeny dia m3-m6, ny fitaovana dia tanjaka avo c102a, ny fitsaboana amin'ny tany dia nohosorana, ny loko mavo, manga sy fotsy amin'ny ankapobeny.
Ao amin'ny indostrian'ny fastener iray manontolo, ity vokatra ity dia manan-danja toy ny volo rindrina maina ary manana habetsahan'ny varotra lehibe. Ampiasaina betsaka amin'ny famokarana fanaka sy indostria hafa izy io, saingy mbola voafetra ihany amin'ny tsenan'ny DIY. Amin'izao fotoana izao, ny mpanjifa ao an-toerana dia mividy an'io karazana fivarotana lehibe io, izay ampiasaina amin'ny fametrahana lalamby, savily (toa ny 3.5 * 16, sns.), Ny fanitarana trondro (toy ny 4 * 40, sns.), Ary ny fanoloana hazo visy hametahana sy fanamboarana fanaka sy lalimoara. Ny kalitao dia tsara kokoa, ny takelaka yuan Ling novokarin'ny orinasa Shanghai hangtou mahazatra dia tsara kokoa ary ny vidin'ny fonosana kalitao dia tsara kokoa ara-toekarena sy ara-toekarena amin'ny lafiny rehetra. Ny volom-borona manapaka vodin-drambo dia vokatra namboarina tamin'ny visy fibre teraka mahazatra. Izy io dia nohamarinina indrindra avy amin'ny famolavolana kofehy, ny fikatsahana ny hafainganam-pandeha avo kokoa, ary ny famahana ny olan'ny famakiana mora azo avy amin'ny fampiasana hazo mafy, ary avo ny atiny teknika.
Amin'ny lafiny lehibe, dia afaka manolo ny fampiasana visy hazo mahazatra (visy hazo tsy misy fitsaboana hafanana). Mandritra izany fotoana izany, ny visy kitay dia vokarin'ny teknolojia fihenan-tsoroka voalohany natolotry ny SIDA ho amin'ny fitetezana, izay tsy mitsitsy fitaovana ihany, fa mahatonga ny kofehy maranitra kokoa koa.
Teo aloha: Kofehy marokoroko kofehy maina
Manaraka: Vovoka fandavahana tena lohan'ny CSK
Borosy lohan'ny fandavahana tena
Ny vy C-section mahazatra ho an'ny unistrut dia mafana ...
Kalitaon'ny karbaona avo lenta DIN934 hexagon nut m3 ...
Fitaovana takelaka tariby, kodiarana amin'ny kalesy, flange ...
Bolt heksagon vy vy
DIN 741 Hardware, Rigging Zinc nopetahany takelaka karbaona st ...